फेरि मन्त्री थप्दै ओली - नेपालबहस
फेरि मन्त्री थप्दै ओली
| ११:०१:४५ मा प्रकाशित
२३ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली आफ्नो ऐतिहासिक कार्यकालमा आज १९ औं पटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दैछन् । अस्ती शुक्रबार मात्रै उनले जनता समाजवादीकाे विद्रोही पक्षलाई समेटेर पुनर्गठन गरेका थिए । पुनर्गठन गर्दा उनले आफ्नै पक्षका धेरै मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेका थिए ।
आफ्नो साथमा राखिएका सात वटा मन्त्रालयमा आज उनले पूर्व माओवादी पक्षका केही र आफ्ना केही विश्वास पात्रलाई राखेर पुनर्गठन गर्न लागेका हुन् । बालुवाटार निकट स्रोत भन्छ–सकेसम्म माधव नेपाल पक्षका केही सांसद तानेर मन्त्री बनाउने ओलीको रणनीति थियो । तर तत्काल त्यो संभव नदेखिएकाले अहिलेलाई आफ्नै पक्षका मन्त्री बनाउने भएका हुन् ।
स्रोत भन्छ – पूर्व माओवादी पक्षबाट अहिले रामबहादुर थापा बादल र टोपबहादुर रायमाझीलाई मात्रै अहिले समावेश गरिने छ । बादललाई फेरि पनि गृह नै दिइने भएको छ । रायमाझीको भने अझै टुंगो लागिसकेको छैन ।
उता, अब थपिनेमा महेश बस्नेत र नारदमुनि रानाको नाम निश्चित छ । त्यसैगरी विशाल भट्टराईलाई समेत मन्त्रिमण्डलमा ल्याउने ओलीको योजना रहेको छ । मन्त्रालय भने अझै यकिन भइसकेको छैन ।
उपचारको आशमा पूर्वलडाकु परियार ३ मिनेट पहिले
पहिरोका कारण सिद्धार्थ राजमार्ग अबरुद्ध ७ मिनेट पहिले
नबिल बैंकको बैकिङ सेवा ४ देखि ७ गतेसम्म बन्द हुने ९ मिनेट पहिले
संक्रमणको उच्च जोखिमका कारण पनौती जात्रा स्थगित २४ मिनेट पहिले
बेलायतले जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा दिने सहायता बजेट कटौती ३५ मिनेट पहिले
कालीगण्डकीमा आएको बाढीले सेतीवेणीका ८ घर डुबानमा ४७ मिनेट पहिले
एनसीसी बैंकको शेयरमा खरीद चाप उच्च ५० मिनेट पहिले
बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र राहत कार्य प्रभावकारी बनाउन प्रचण्डको आग्रह ५४ मिनेट पहिले
प्रवक्ता शर्माको मुख्यमन्त्री नेपालीलाई पत्र: फुकेर चल्नोस् ! सोचेर बोल्नोस्, सही निर्णय गर्नोस् २४ घण्टा पहिले
युएमएनद्वारा डोटीमा स्वास्थ्य सामग्री सहयोग २ हप्ता पहिले
नेपालमा संक्रमण घट्यो, लापरबाही बढ्यो ! बाहिर निस्कने जमात यत्रतत्र १ हप्ता पहिले
एनआईसी एशिया क्यापिटलले असार १० गतेदेखि अर्को म्युचुअल फण्ड निष्काशन गर्दै १ दिन पहिले
चिकित्सकलाई सम्पर्कमा आउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह ९ महिना पहिले
सिईडीबी हाइड्रोपावरको आईपीओ बाँडफाँड आज, कतिले पाउँदैछन १० कित्ता ? १ महिना पहिले
विप्लव समुहद्धारा प्रहरी चौकी आक्रमणको प्रयास, उपत्यका ब्युरो इन्चार्ज माइला लामा फरार २ वर्ष पहिले